Kooxda Arsenal oo aan awoodin inay buuxiso kuraasta garoonka San Serio AC Milan uga tala gashay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaKooxda Arsenal oo aan awoodin inay buuxiso kuraasta garoonka San Serio AC Milan uga tala gashay
Kooxda Arsenal oo aan awoodin inay buuxiso kuraasta garoonka San Serio AC Milan uga tala gashay
07/03/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Mar 7, 2018:- Kooxda Arsenal 4-kulan ee ugu dambeesay oo ay cayaartay dhamaan tartamada kala duwan waa laga badiyay kooxdana jawi kacsan ayay bartanka kaga jirta.
Arsenal waxay 33-dhibcood ka hooseeyaan naadiga Man City oo horyaalka Ingiriiska hogaamineyso halka ay 25-dhibcood ka sareeyaan kooxda West Brom oo horyaalka ugu hooseyso.
Hadaba Arsenal Khamiista waxay garoonka San Serio kula cayaari doontaa naadiga AC Milan lugta kowaad wareega 16-aad ee Europa League.
AC Milan waxay Arsenal ugu tala gashay ama u baneesay 4,000 oo kuraas ama tikit iyo 1000 tikit oo dheeraad ah hadii ay u baahdaan.
Balse haatan Arsenal waxaa laga soo xigtay in 2000 tikit oo kaliya la iibsaday ama 2000 taageero kaliya diyaar u yihiin Khamiista inay kooxda la safraan oo la adan dalka Talyaaniga.
Taasi oo muujineyso in taageerayaasha Gunners-ka ka careesan yihiin hoos u dhaca kooxda heesto iyo in weli macalin Arsene Wenger naadi sii leylinaayo halkii laga racadeen lahaa macalinka.
DHAGEYSO: Wasiir ka tirsanaa koonfur Galbeed iyo Xildhibaan Hirshabeelle oo qarax lagu dilay